Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 15, ny rafitra fiasa vaovao | Vaovao IPhone
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 15, ilay rafitra fiasa vaovao
Miguel Hernandez | | iOS, iOS 15, About us
Mandritra ny WWDC21 fa niaina hatramin'ny omaly isika dia nahazo vaovao marobe, na izany aza, fantatsika rehetra fa i iOS no ivon'ny jiro rehetra, ny rafitra fiasan'ny finday an'ny orinasa dia niaraka taminay hatramin'ny nanombohan'ity tranonkala ity ary tsy azonay tsy hita ilay fotoana nandrasana hatry ny ela. miaraka amin'ny iOS 15.
Ireto misy ny vaovao rehetra avy amin'ny tanan'ny iOS 15 ary tsy tokony ho diso ianao, asehonay anao ny momba ny iOS 15. Ary tsy hifantoka amin'ilay nolazain'i Apple tamim-piravoravoana fotsiny izahay fa asehonay anao koa ireo fiasa "miafina" tsy nolazain'ny orinasa Cupertino nandritra ny famelabelarana.
1 FaceTime, tranonkala izao ary miaraka amina feon-tsiranoka
2 SharePlay, zarao ny atiny multimedia
3 Mifantoha amin'ny Mifantoka ary mamokatra amin'ny LiveText
4 Mitombo sy mihatsara ny spotlight
5 Wallet sy ora, bebe kokoa ary tsara kokoa
6 Apple Maps fanamboarana endrika
7 Fifanarahana IOS 15
FaceTime, tranonkala izao ary miaraka amina feon-tsiranoka
Tamin'ny fahatongavan'ilay areti-mandringana Apple dia nahatsapa fa nitaky fanatrehana kely kokoa ny FaceTime, Izany no antony nanapahan-kevitra ny hanavao miaraka amin'ny FaceTime. Voalohany indrindra, izao dia afaka manao antso amin'ny olona tianao ianao amin'ny alàlan'ny fandefasana rohy amin'izy ireo, hiditra amin'ny tranokala web ahafahanao mizara ny FaceTime aminay amin'ireo mpampiasa izay ao amin'ny terminal Android na fitaovana Windows tsy mila izany misy karazana fametrahana.
Ho fanampin'izay, ny FaceTime dia nanisy fampiasa iray ahafahana manafoana ny antso an-kira ivelany Spectrum lehibe, amin'ny fomba mitovy amin'ilay malaza Audio spatial tafiditra tanteraka ao amin'ny fampiharana antso video an'i Apple.
SharePlay, zarao ny atiny multimedia
Ary koa ny voankazo voalaza etsy ambony, Apple dia nanangana serivisy hahafahantsika mizara mozika sy atiny audiovisual amin'ny streaming mivantana amin'ireo olona tadiavintsika amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny asa ankehitriny. Sary-in-saryizay efa mampifangaro ireo fitaovana farany an'ny orinasa. Amin'izao fotoana izao Disney +, HBO ary Twitch dia sasantsasany amin'ireo serivisy izay nanambara ity asan'ny fizarana atiny amin'ny streaming ity.
Io koa dia ankoatry ny fizarana mivantana ny efijery amin'ny alàlan'ny antso FaceTime na ny serivisy rehetra notononinay hatrizay. Toy izany koa, ireo fiasan'ny tolo-kevitra nizara Izy ireo dia hamela antsika mivantana amin'ny alàlan'ny iMessages, Apple Music ary ireo rindranasa mifangaro hafa hanoro hevitra ny atiny ho an'ny mpifanerasera aminay, tsy mila mandefa ireo rohy amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Mifantoha amin'ny Mifantoka ary mamokatra amin'ny LiveText
Ny famokarana koa dia misy dikany bebe kokoa, ny rafitra Focus dia hamela antsika hanitsy karazana aza manelingelina ny maody mandroso izay hanome antsika fotoana hanitsiana izay karazana fampandrenesana tadiavintsika hanafika ny fotoanan'ny fifantohana, na satria miasa na manao fampianarana isika. Ho fanampin'izany, ho azonay atao ny mampifanaraka an'io safidy io amin'ny serivisy sisa tavela toa ny mety hanitsiana ireo seho misy jiro samihafa.
Manohy ny LiveText, fampiasa vaovao izay tafiditra tanteraka ao anaty fakantsary iOS ary hahafahantsika misambotra votoaty an-tsoratra haingana. Ny lahasa ifotony toy ny fakàna sary an-telefaona amin'ny peta-drindrina sy ny fanaovana antso dia hamonjy antsika fotoana betsaka. Ity fahaiza-manao ity dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny sary sy sary miaraka amin'ny sary nalaintsika tamin'ny fotoana iray, izay tena mahaliana.
Ity dia namboarina niaraka tamin'ny fahafaha-manao fandikan-tsary amin'ireo sary ireo ihany, Efa fantatsika fa nanao an'io asa io haingana ny Google Lens, Fa ny fampidirana azy mivantana amin'ny iOS dia hanamora ny zavatra anay, ary maninona raha tsy hiteny izany, ny fitsapana voalohany dia milaza fa toa manatsara ny fifaninanana ny valiny fandikana sy ny famantarana.
Mitombo sy mihatsara ny spotlight
Mitovy amin'ny fomba ahafahantsika mamaky atiny amin'ny sary sy mandika azy io, izany rehetra izany dia ho hita taratra ao amin'ny Artimental Intelligence an'ilay fitaovana. Ny motera fikarohana mifangaro ao anatin'ny fampiharana Photos dia hanao asa ampifandraisina amin'ny Spotlight ankehitriny mba hanomezan'izy ireo antsika ny valiny azo avy amin'ny zavatra tadiavinay. Raha mampiditra lahatsoratra ao amin'ny Spotlight izay mifanaraka amin'ny sary isika dia haseho haingana izany.
Toy izany koa no hitranga amin'ny fifandraisana, mailaka na hafatra, Nihatsara fatratra ny fikarohana spotlight, Na eo aza ny zava-misy fa mpampiasa maro no tsy mahalala ny fampiononana atolotry ny iOS Spotlight, na dia eo aza ny zava-misy fa amin'ny macOS dia iray amin'ireo fahaiza-miasa be mpampiasa indrindra io.
Wallet sy ora, bebe kokoa ary tsara kokoa
Ankehitriny ny fangatahana Wallet dia hahafahantsika mampiditra antontan-taratasy momba ny mombamomba anay any amin'ireo firenena izay eken'ny manam-pahefana ny fampifanarahana. Izahay dia mieritreritra fa zavatra iray any Espana izay tsy afaka nofinofisintsika vetivety fotsiny. Toy izany koa, hitombo ny mifanentana amin'ireo rafitra fanidiana hidy, ary koa ny isan'ny hotely mifanaraka amin'ny NFC an'ny iPhone izay mamadika ny iPhone ho fanalahidy.
Toy izany koa, ny app Weather dia nohavaozina ary haneho ny atiny feno antsipiriany momba ny toetry ny tontolo iainana. Na izany aza, ny atin'ny fampahalalana dia hijanona amin'ny mpamatsy iray toy ny teo aloha ihany.
Apple Maps fanamboarana endrika
Apple dia mbola mitolona amin'ny Google Maps mba hampalaza ny serivisiny, farafaharatsiny amin'ny fitaovana iOS, na dia eo aza ny zava-misy fa toa efa nipetraka ho an'i Google ny ady. Mandritra izany fotoana izany, Apple dia nanamboatra endrika tanteraka ny rafitry ny fivezivezena Apple Maps, nanampy ny fanondroana ny lane, ny antsipiriany bebe kokoa, ny fetran'ny lane ary koa ny jiro fifamoivoizana. Ity fampahalalana ity dia ho be dia be kokoa raha mifanaraka amin'ny tanàna sasany any Etazonia.
Mazava ho azy fa tonga ihany koa ireo fivoarana ireo Milalao fiara ary hanatsara ny famantarana izany fa mandraka ankehitriny dia aseho amin'ny Apple Watch.
Fifanarahana IOS 15
Ity rafitra fiasa vaovao ity dia hifanaraka amin'ireo fitaovana mitovy amin'izany ihany izay nanjary iOS 14. Azo antoka fa tsy nampiditra fivoarana ara-teknika be loatra tao amin'ny rindrambaiko ny Apple, saingy mazava fa ny fifanarahana taona lasa izay dia nahagaga ny mponina sy ny vahiny. Ity ny lisitry ny fitaovana iPhone sy iPod mifanaraka amin'ny iOS 15:
iPhone SE (taranaka 1)
iPod Touch (taranaka faha-7)
Ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy dia andrasana amin'ny tapany faharoa amin'ny volana septambra, miaraka amin'ny famoahana ofisialy ny iPhone 13 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 15, ilay rafitra fiasa vaovao
Siaka TRAORE dia hoy izy:
Valio amin'i Siaka TRAORE
Apple Music dia efa manana ny atiny Dolby Atmos ary tsy misy fatiantoka
Fampiharana vaovao ho an'ireo mpangalatra iPhone miaraka amina endrika "Fikarohana" vaovao ao amin'ny iOS 15